वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : September 2011
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ September 28, 2011
प्रधानमन्त्रीले महँगा गाडीको ‘त्याग’ गरेर र मुस्ताङ्ग चढेर वाहवाही
लुटेकाले मन्त्रीहरुलाई पनि त्यस्तै वाहवाही लुट्ने लोभ लाग्यो। यसैले मन्त्रीहरु
‘त्याग’ का एक से एक रचनात्मक उदाहरणहरु देखाउन थाले। एक जना मन्त्रीले आफूले अब
सरकारको केहि पनि नचढ्ने, चढ्नुपर्ने कुरा आफनै मात्र चढ्ने घोषणा गरे। यसपछि एक
लालबुझक्कड मन्त्रीले आफू मोटरसाईकल मात्रै चढ्ने वाचा के गरेका थिए, शेरमाथिका
सवा शेर अर्का निक्ले र घोषणा गर्दिईहाले, ‘म पनि अब मन्त्री छउञ्जेल साईकलमात्रै
चढ्छु!”। यी त शेर माथिका सवा शेर मात्रै रहेछन्, अर्का साढे शेर निक्ले, “म त झन्
केहि पनि चढ्दिन, पैदलै हिँड्छु!“।
यो त ‘त्याग’को पराकाष्ठानै भयो, अब त सकियो होला भनेर जनता गम्दै थिए,
तर अर्का अझ 'महात्यागी' निक्ले र घोषणा गर्दिए, “म त अबदेखि चढ्ने-उड्ने कुरा त के हिँड्दा
पनि हिँड्दिन ल। लौ मेरो भन्दा बढी त्याग गरेर देखाओस् त कसैले?!” पढीसकेपछि लघुकथा जस्तो लागेन भने यसलाई एउटा जोकै मान्दिनुस्:)
झूटो-साँचो हावा थोरै बहिदिए पुग्छ
रेलिङ्ग भाँच्ने शक्ति थोरै रहिदिए पुग्छ
जस्को पनि जन्ती, जस्को पनि मलामी
हामीलाई बस् केहि भईदिए पुग्छ।
"राष्ट्रिय पोशाक नीति"
पाईण्टमाथि कट्टु लगाए पनि हुन्छ
रातो साडीको फेटा सजाए पनि हुन्छ
अबदेखि सभासद र मन्त्रीहरु
कार्यालय नाङ्गै आएपनि हुन्छ।
लोड-शेडिङ्ग रहेछ त्यो दिन। हामीले खाना खान थाल्दा-नथाल्दै भयंकर हुरीसंगै पानी बर्सिन पनि शुरु भयो। आधा घण्टाजतिमा रोकियो र एकछिनमा बत्ती पनि आयो। खानासंगै अलिअलि नाचगान पनि शुरु भएको थियो। वर्षायाम भएकोले सबै खेतीपातीमा ब्यस्त हुँदा साँस्कृतिक तयारी त्यति हुन नसकेको कुराको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो नन्द सर। हाम्रो समूह पनि सानै थियो, फेरि समूहका सबै नेपालीमात्रै। यो कारण पनि हुनसक्छ त्यति उत्साहित माहौल नदेखिनुमा। जे होस् रमाईलै भयो भन्नुपर्छ समग्रमा। दोहरी निकै रन्कियो एक छिन्। हाम्रो समूहका शिव सर खप्पीस हुनुहुँदोरहेछ दोहरीमा। उहाँको गायकीको बारेमा थाहा थियो, तर दोहरीमा पनि पोख्त हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। बाँकी हामी अरुको काम भनेको थप्पडी बजाउने र नाच्नेमात्रै भयो। खाना खाईसकेपछि एकछिन स्थानीय कौडा नृत्य पनि हेर्ने अवसर पाईयो। दोहरीको स्थानीय टिम
कौडा गाऊँदै स्थानीयहरु कार्यक्रमको बीचतिर फिट्टान भएर ढल्पलिँदै एकजना युवा आईपुगे र उफ्री-उफ्री नाच्न थाले। ती बेला-बेलामा "तिमी टाढा, मैपनि टाढा; माछी काँडे डाँडैमा घर सार" भाकाको फर्माईश पनि गरीरहेका थिए। चालढालले ती भाइ स्थानीय होईनन् भन्ने सहजै थाहा हुन्थ्यो। उनी जुम्लाका रहेछन्। नेपाली सेनाका जवान ती भाइ यतिखेर भने दगामको छेवैको अर्को डाँडाको टुप्पोमा रहेको दूरसञ्चारको टावरको रक्षार्थ खटिएका रहेछन्।
तिनको चुरीफुरी 'साह्रै' भएपछि हामीमध्येकै एकजना साथी पोखराको फूलबारी ब्यारेकको क्याप्टेन बन्नुभयो। अर्को एकजना साथी ती भाइका गणपतिका साथी बन्नुभयो र आफ्नो गणपति 'साथी'संग मोबाईलमा 'कुरा गर्न' थाल्नुभयो। क्याप्टेनलाई नजिकै देखेपछि र गणपतिका कुरा सुनेपछि जुम्ली भाइलाई रक्सीले छोडेजस्तो भयो, ती त्यसपछि शान्त भएर एक छेऊमा बसे। भोलिपल्ट बिहानै हामी नउठ्दै आईपुगेका थिए रे ती र नन्द सरसंग 'हिजो बेलुका सरहरुसंग नराम्रो गरें कि क्या हो?' भनेर पीर मान्दै थिए रे। क्याप्टेन (ज्याकेटमा) र जवान। जवानले क्याप्टेनलाई 'चिन्नु' भन्दा पहिले:)
रुपाताल लगभग पूरै देखिन्थ्यो त्यहाँबाट। "ऊ त्यो देखिएको चाहिँ रुपाताल, नदेखिएको चाहिँ वेगनास ताल!" भनेर ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साथी। बादलमुनिका बस्तीहरु र बादलमाथिका हिमालहरु
एकछिनमा एकजना साथी उठेर आउनुभयो। अरु तीनजनालाई पाहुना घरमै छोडेर म र उहाँ नजिकैको अर्को डाँडातिर लाग्यौं। फेदीमा एउटा प्राथमिक विद्यालय रहेछ, २०११ सालमै स्थापना भएको। २०११ सालमै विद्यालय स्थापना भईसकेको कुराका आधारमा यहाँको शैक्षिक चेतना धेरै माथिल्लो स्तरको भईसक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो दगाममा। अलिकति भौगोलिक दुर्गमता, अलिकति राज्यको वेवास्ता र अलिकति शिक्षित दगामेलीहरुको पलायन सबै मिलेर यो स्थितिको निर्माण भएको हुनुपर्छ। त्यहि विद्यालयनै नन्द सरको कार्यस्थल पनि रहेछ। विद्यालय कटेर उकालो उक्लिसकेपछि दुईटा समथर भूभाग देखिए; एउटा त्यहाँको पूजाआजा गर्ने-बलि दिने कोट थियो, अर्को समथर भूभाग बनभोजस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्दो देखिन्थ्यो। त्यहाँबाट पनि पोखरासम्मको दृश्य र हिमालहरु देखिन्थ्यो। दक्षिणतिर फर्किएर हेर्दा। बादलको समुद्रले छोपिएका छन् बस्तीहरु।
हामीलाई देखेपछि ती भाइ अलि सतर्क भए र 'क्याप्टेन' को नजिकै उभिएर जीऊ तनक्क तन्काएर स्यालुट गरे। 'क्याप्टेन साप' ले उनलाई 'ल राम्रोसंग ड्युटी गर्नु!' भनेपछि हामी हाँस्दै बाटो लाग्यौं। ती भाइले सुरक्षा गरेको टावर कत्तिको सुरक्षित होला! धन्न अहिले द्वन्द्व छैन यो क्षेत्रमा!
(समाप्त) Posted by
पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने एउटा बजार खैरेनीटारमा आफ्ना साधन राखेर हामी गाऊँ पसेका थियौं, पौने दुई भईसकेको थियो। सहयात्री साथीहरु (ईश्वर, गोपाल, शिव र महादेव) पहिले पनि गईसक्नुभएको रहेछ दगाम। उहाँहरु त्यसबेला अर्कै बाटो मोटरसाईकलमा जानुभएको रहेछ। यसपालि भने हिँडेरै जाने योजना थियो। खैरेनीटार र लगत्तैको दरगाम गाऊँमा सोधखोज गर्दा साढे-दुई तीन घण्टा लाग्ने जानकारी पाईयो। यो हिसाब दैनिकजसो ओहरदोहर गरीरहने, बानी परेका मानिसहरुका लागि हो। यसैले हाम्रा लागि ४-५ घण्टा लाग्ने कुरामा हामी ढुक्क भयौं। फेरि हामीलाई हतारिएर हिँड्नु थिएन, बाटामा पर्ने ग्रामीण भेग र जंगलहरुको अवलोकन गर्दै, आधा घण्टाको फरकमा केहि क्षण आराम गर्दै हिँड्न चाहन्थ्यौं, साँझ सात बजेसम्ममा दगाम पुगे हुन्छ भन्ने मानसिकतामा थियौं हामी। मैले नेपाल धेरै घुमेको छैन। जापानबाट फर्केपछि त झन् कतै पनि गएकै छैन। यसैले बाटाका हरेक दृश्य मेरा लागि नयाँजस्तै र ताजगीदायक (refreshing) भए। मलाई मेरो देशको सौन्दर्यले जहिलेपनि खुशीनै खुशी भरिएको भावुकता दिन्छ। र त्यो दिनको यात्राभरि पनि हरियो सौन्दर्यको खात लागेको थियो हाम्रो वरिपरि जतिखेरपनि।
उकालीमा। विश्राममा सहयात्रीहरु
दगाम यो भिरालो डाँडाको टुप्पैमा बसेको छ। दगामलाई पाल्ने खेतीपातीले ढाकिएको छ पूरै डाँडो। दगामको मलिलो ज्यानको एउटा हिस्सा
गाऊँ पसेर गाऊँका मसिना गोरेटा बाटाहरु छिचोल्दै हामी अलिक माथि रहेको गाऊँको मूलबाटोमा पुग्यौं। मूलबाटो किन भनेको भने दगाम एउटा फराकिलो (तर कच्ची बाटो)ले वरिपरिका शहरी भेगसंग जोडिईसकेको रहेछ। कच्ची हुनाले बर्खायाममा भने बाटो त्यति भरपर्दो नहुने रहेछ। अलिकति अगाडि बढेपछि हामीलाई स्वागत गर्न त्यो गाऊँका 'मुखिया' नन्द थापा मगर उभिईरहनुभएको थियो। उहाँसंग भलाकुसारी र परिचय (नयाँ त मै मात्र थिएँ)पछि हामी त्यहाँको पर्यटकीय प्रयोजनका लागि बनाईएको सामुदायिक भवनतिर लगियौं। त्यहाँ केहि किशोरी बहिनीहरुले माला र टिकाले हामीलाई स्वागत गरे। स्वागतपछि। हामी खैरेनीटारबाट हिँडेको लगभग पाँचघण्टा भईसकेको थियो।
शीतल बतास चलिरहेको थियो, त्यसले लखतरान भएर थाकेको हाम्रो ज्यानमा नयाँ ज्यानको संचार गरायो। त्यहाँबाट दुलेगौंडा, लेखनाथ नगरपालिकाको केहि भाग, रुपाताल र पोखराकै पनि केहि भाग देखियो। साँझ परीसकेकोले बत्तीहरु टिल्पिलाउन थालीसकेका थिए सबैतिर। दगामबाट देखिने दृश्य एकदम रोमाञ्चक थियो। हवाईजहाजले अलिकति उचाई लिएपछि देखिनेजस्तै थियो दृश्य। धोका दिन थालेको मेरो तीन वर्ष चानचुन पूरानो क्यामेरा त्यो दृश्यलाई कैद गर्न सफल भने भएन। दगाममा एक रात-२